SECES sampana Antananarivo “Lalàna maro no mila asiam-panitsiana”
Namoaka fanambarana ny biraon’ny SECES sampana Antananarivo omaly alarobia 6 febroary.
Milaza ny eo anivon’ity sendikan’ny mpampianatra mpikaroka ity fa mizotra tsikelikely mankany amin’ny demokrasia ny firenena Malagasy na teo aza ny lesoka isan-karazany sy ny tsy fahatomombanana teo amin’ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Tsy azo ekena intsony ny mbola fiverenan-dalana amin’ny demokrasia, hoy ny SECES. Nambaran’izy ireo fa tsy mety ny fanaovana mizana tsindrian’ila, ny zanak’ikalahafa ary ny kajikajy manokana efa lany andro ametrahana namanamana eo amin’ny fitantanan-draharaha amin’ny sehatra rehetra, indrindra ny eny anivon’ny anjerimanontolo. Nanao antso avo amin’ny praiminisitra sy ny filoham-pirenena mba hijery haingana sy handray fanapahan-kevitra hentitra manoloana ny tokony ho fampiharana fifidianana andraisan’ny rehetra anjara (Suffrage Universel), ka hampitovy zo ny mpampianatra-mpikaroka tsirairay eo amin’ny latsa-bato, ka izay nahazo isam-bato be indrindra amin’ireo kandida no lany hitondra ny oniversite, ny “Domaine” na ny “Etablissement” na “Faculté” ary ny “Mention” tsirairay. Betsaka, hoy ny SECES, ireo fehezan-dalàna sy rijan-teny mila fanavaozana sy fanitsiana na fanamboarana, toy ny lalàna mifehy ny fifidianana amin’ny anjerimanontolom-panjakana, ny lalàna momba ny politikam-pirenena mahakasika ny fikarohana eto Madagasikara.